Maxkamadeynta Ciidanka AMISOM oo weli Muqdisho ka socota | Baydhabo Online
Maxkamadeynta Ciidanka AMISOM oo weli Muqdisho ka socota
Magaalada Muqdisho waxaa weli ka socota Maxkamadeynta 17 Askari oo ka tirsan ciidanka AMISOM kuwaas oo loo heysto eedeymo la xiriira in ay si sharci doro ah u iibaneyeen Sahnadda ciidanka kuwaas oo iyagoo fal dambiyeedkaasi ku dhex jira ay qabteen ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ee dalka Uganda ayaa shalay magaalada Muqdisho ka furtay edeeymahan loo heesto 17-ka Askari ee ka tirsan ciidanka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM.
Askartii ay ciidanka Boliiska Soomaaliya ay gacanta ku soo dhigeen iyagoo iibinayo shidaal iyo qalab AMISOM ay leedahay 5-tii Bishii June ee sanadkan tiradooda waxa ay aheyd 5 Askari oo kaliya laakiin kiiskan waxa uu lugaha la galay tiro intaa Saddex laab ka badan sida uu sheegayo Brig Dick Olum oo ah Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Uganda.
Maxkamadda ayaa shalay dhageysatay eedeynta loo soo jeediyay iyadoo sidoo kalana su’aalo la weydiiyay marqaatiyaal maxkamadda la horkeenay.
Brig Dick Olum Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Uganda ayaa sheegay in Major Bob Francis Aring oo ahaa taliyihii Ciidamadaas Heysta lagu Xakumay hal sano oo Xariga ah iyo hoos loo dhigo darajadii Ciidan ee uu lahaa, kadib markii ay ku cadaadeen eedeymihii loo heystay.
Maxkamadeynta Ciidamada ayaa sii socon doonto, iyadoo Garsoorka Maxkamadda Ciidamada Uganda uu balanqaaday in Cadaaladda la marsiin doono Askarigii ku xadgudba qawaaniinta ciidanka, dhamaana dib loogu celin doono dalka Uganda.